Vono sy fandrahonana amin’ny basy: naratra mafy noho ny daroka ilay mpisolovava | NewsMada
Vono sy fandrahonana amin’ny basy: naratra mafy noho ny daroka ilay mpisolovava
Niteraka resabe. Vao maraina, ny asabotsy teo, tetsy Antanimena, lehilahy iray nitam-basy, sady zanaka jeneraly, niampy ny namany roa lahy hafa, nidaroka mpisolovava iray. Tsy niandry ela ny fitoriana ary nilatsaka ny IST.
Naratra mafy ity farany ary naiditra hopitaly hatramin’ny asabotsy teo. Araka ny vaovao teny Antanimena, nanomboka tamin’ny filazana fa voahitsaky ny fiaran’ilay mpisolovava ny tongotr’ity zanaka jeneraly ity. Raikitra ny fifandonana ka notambaran’ireo telo lahy ilay mpisolovava, sady nambanana basy avy eo nampandohalihina. Niditra an-tsehatra ny polisy iray niasa tsy lavitra teo rehefa nantsoin’ny olona hampitsahatra izany saingy niala maina noho ny karazana tsindry bokotra samihafa nataon’izy telolahy. Nentina tany amin’ny polisy Tsaralalana izy ireo avy eo. Nalefa tany amin’ny hopitaly ilay mpisolovava avy eo. Notazonin’ny polisy “violon” kosa ilay namono. Ilay faharoa, anisan’ny nidaroka voalaza fa nitolo-batana teny amin’ny zandary misahana ny raharaha ady heloka bevava Fiadanana. Namoahana taratasy fikarohana ny fahatelo, anisan’ny nidaroka koa. Niely ny feo fa efa misy ny miketrika ny fampanginana ny raharaha. Nanao fanambarana avy hatrany ny teo anivon’ny primatiora hanokatra fanadihadiana, ary mampitandrina ireo mikasa hanao lavatanana. Nanambara koa ny polisim-pirenena fa tsy polisy io nikasi-tanana io, araka ny naparitaka tamin’ny tambajotra sosialy. Milaza izy ireo fa mandray an-tanana ny raharaha.
Nametraka fitoriana ny holafitry ny mpisolovava
Nametraka fitoriana eny amin’ny BC Anosy ny holafitry ny mpisolovava, ary milaza fa tsy hanaiky mora ity herisetra natao tamin’ny olon’izy ireo ity. Voalaza koa omaly, fa nilatsaka ny IST, tsy fahazoan’ireo voarohirohy hivoaka an’i Madagasikara. Andanin’izany, niaro tena ireo voarohirohy fa nila sotasota tamin’izy ireo ilay mpisolovava, ary nitohy ny ady avy eo. “Niverina indroa teo an-toerana izy ireo ary nanosy anay”, hoy ny filazan’ireo nandritra ny fiarovan-tenany. Fantatra taorian’izany fa naiditra eny amin’ny Homi ilay zanaka jeneraly io. Ilay jeneraly voalaza fa saika hoesorina amin’ny toerany eny Mahazoarivo, mbola miandry ny filankevitry ny minisitra ny fanalana azy. Andrasana ny ho tohin’ny raharaha.